Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Olive Leaf Extract - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive kuyisithako esinamandla sokudla kanye nokwelapha njengoba kuqukethe ama-antioxidants aqinile njenge-polyphenols oleuropein, i-hydroxytyrosol ne-verbascoside. Isizinda se-Ultrasonic kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhipha nokuhlukanisa izinto ezihlanganisa izinto eziphilayo ezifana nama-polyphenols, ama-flavones nama-terpenoid avela emaqabungeni omnqumo.
Olive Leaf Khipha
Amaqabunga e-Olive (Olea europaea), imfucuza yezolimo noma umkhiqizo, angumthombo omkhulu wama-antioxidants wemvelo. Amaqabunga e-Olive aqukethe ama-polyphenols ahlukahlukene (awaziwa nangokuthi ama-biophenols), njenge-oleuropein ne-oleacein. Ama-polyphenols avela ngokwemvelo ezitshalweni futhi afaka isandla ezinzuzweni zezempilo zokukhishwa kweqabunga lomnqumo. Ngaphandle kwama-polyphenols, amaqabunga esihlahla somnqumo acebile ngama-antioxidants, njenge-ligstroside isomers, i-hydroxytyrosol, i-tyrosol ne-caffeic acid.
Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive kungukugxila kwama-phytochemicals emaqabungeni omnqumo futhi kuqukethe inani eliphezulu lama-antioxidants anamandla. Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive ngokwesiko kusetshenziselwa ukukhulisa amasosha omzimba. Isibonelo, inikezwa ukuthuthukisa izimpawu zomkhuhlane ovamile, ukukhwehlela, nomphimbo obuhlungu.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo luphakamisa ukuthi ama-polyphenols akhiphe iqabunga lomnqumo anganciphisa ubungozi bezifo zenhliziyo nemithambo yegazi, amazinga aphansi e-cholesterol, asize ekwehliseni isisindo, abonise imiphumela elwa namagciwane, futhi asebenze njenge-anti-cancer agent.
Ngalesi sizathu, okukhishwa emaqabungeni omnqumo (i-Olea europaea L. folium) kusetshenziswa njengesithako esisebenzayo ekwakhiweni komkhiqizo wemithi yokwengeza kanye nezithako zokudla. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwamaqabunga omnqumo kusetshenziselwa izithasiselo zokudla okunempilo, izindlela zokwelapha, izimonyo, kanye nokudla neziphuzo.
Kufakwe Amafutha Omnqumo: Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive nakho kusetshenziselwa ukucebisa amafutha omnqumo afana ne-extra olive olive. Iqiniswe ngokukhishwa kweqabunga lomnqumo, uwoyela womnqumo unephrofayili ecebile yokunambitheka futhi inani le-ORAC lamafutha omnqumo liyakhushulwa. Ngeqabunga lomnqumo elifakwe uwoyela womnqumo likhombisa impilo eshalofini ethuthukisiwe nokuqina kokushisa okuphezulu njengoba ama-antioxidants ehlasela ama-radicals wamahhala futhi evimbela ukuqina.
I-UIP4000hdT, iprosesa enamandla we-4kW ye-ultrasonic yesizinda se-botanical
Izinhlanganisela ze-Olive Leaf
Ukwakheka kwamakhemikhali e-phenolic emaqabunga omnqumo kufaka ama-oleurosides (oleuropein, verbascoside), flavones (luteolin, diosmetin, apigenin-7-glucose, luteolin-7-glucose, diosmetin-7-glucose), flavonols (rutin), flavan-3- ols (catechin) kanye ne-phenolsic derivatives (tyrosol, hydroxytyrosol, vanillin, vanillic acid, caffeic acid). I-Oleuropein ne-hydroxytyrosol yizakhi ezibaluleke kakhulu zama-phenolic emaqabungeni omnqumo.
I-Oleuropein, i-iridoid yomnqumo engeyona enobuthi (uhlobo lwe-monoterpenoid), uhlobo lwenhlanganisela ye-phenolic ebabayo. Ngenkathi ikhona esikhunjeni somnqumo esiluhlaza, inyama, imbewu, namaqabunga, i-oleuropein yiyona etholakala kakhulu emaqabungeni omnqumo. Ngokuqukethwe okunesisindo esomile esingu-6-14% iyona i-molecule evelele kakhulu yezinto eziphilayo kuma-lave olive. Ngokuya ngesilimo somnqumo, isikhathi somhlabathi nesikhathi sokuvuna, okuqukethwe kwe-oleuropein kungakhuphuka kuze kufike ku-17-23% wesisindo esomile.
I-Hydroxytyrosol iyi-metabolite ye-oleuropein. Womabili ama-molecule aziwa ngomsebenzi wawo onamandla wokulwa ne-antioxidant, onikela kokunye kwemisebenzi yamafutha omnqumo e-antioxidant, anti-inflammatory, and izifo. I-Hydroxytyrosol inelinye lamanani aphakeme kakhulu owazi i-ORAC (i-oxygen radical absorbance capacity) amanani abonwa kuma-antioxidants emvelo.
Ukukhishwa kweqabunga lomnqumo ogcwele ngokuphelele kuqukethe ama-polyphenols amaningi, ama-antioxidants namanye ama-phytochemicals, anemiphumela yokusebenzisana. Isizinda se-Ultrasonic inqubo ethembekile yokukhipha, ekhipha wonke ama-phytochemicals avela emaqabungeni omnqumo futhi ikhiqize ngaleyo ndlela ukukhishwa kwe-broadband enamandla kakhulu.
UP100H nge-MS14 sonotrode yokukhipha ama-botanicals, njengamaqabunga omnqumo
Kuyini ukukhishwa kwe-Ultrasound ne-Ultrasonic?
I-Ultrasound ichazwa njengokudlidlizela kwemisindo okungaphezu kwama-20kHz, okungukuthi ngaphezulu kokushaywa okungu-20,000 ngomzuzwana. Le yindawo engaphezulu kobubanzi bokuzwa komuntu. I-Ultrasound ngaleyo ndlela ihlanganisa uhla olukhulu kakhulu lokudlidliza kwe-acoustic, okusho ukuthi izinhlelo eziningi ezahlukahlukene ziwela emkhakheni we-ultrasound. Izibonelo ezaziwa kakhulu zokusetshenziswa kufaka phakathi izinqubo zokuthatha izithombe kudokotela, usizo lokupaka ezimotweni kanye nokuhlolwa kwezinto ezingonakalisi. Ngezibonelo ezishiwo imvamisa ephezulu, kusetshenziswa i-ultrasound engonakalisi.
I-ultrasound yamandla aphakeme ichazwa njengamandla amakhulu, amaza omsindo ophansi kakhulu anemvamisa ye-approx. 20-60kHz. La magagasi omsindo aminyene amandla akhiqiza imijikelezo yomfutho ophakeme eshintshashintshayo (ukuminyanisa) nemijikelezo yengcindezi ephansi (i-rarefaction) oketshezini. Ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okuphansi, amagagasi aphezulu e-ultrasonic adala ama-bubble amancane we-vacuum noma avele ku-liquid. Lapho lawa mabhamuza efinyelela ivolumu lapho engakwazi khona ukufunxa amandla aqhubekayo, aqhuma phakathi nomjikelezo wokucindezela okukhulu. Lesi simo se-bubble implosion saziwa njenge-cavitation.
I-Cavitation idala izindawo ezishisayo zasendaweni ku-liquid noma slurry, engafinyelela emazingeni okushisa afinyelela ku-5000K nezingcindezi ezifika ku-2000atm. Ngaphezu kwalokho, implosion yamabhamuza e-cavitation adala ama-jets oketshezi ngejubane elifinyelela ku-280 m / s. Lezi zimo ezimbi ngokwedlulele ezenzeka endaweni zidala ukuthi amaseli ezitshalo aqhume, ukuze kudedelwe izinto eziphila ngaphakathi ezingaphakathi kweseli lesitshalo. Lokhu kusho ukuthi, i-acoustic cavitation iphazamisa amangqamuzana ezitshalo futhi iholele ekusakazekeni okuphezulu kwama-molecule we-intracellular kusixazululo sokukhipha (i-solvent), ngaleyo ndlela kukhulise ukudluliswa kwesisindo. Ukudluliswa okukhulu kwesisindo kusho isilinganiso esiphakeme sokukhipha. Ngakho-ke, ama-probe e-ultrasonic angenye yamathuluzi asetshenziswa kakhulu ukukhiqiza ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu kusuka kuma-botanicals afana namakhambi, amaqabunga, izithelo nezinye izinto zokutshala.
Isizinda se-Ultrasonic sinikeza izinzuzo ezahlukahlukene njengokukhishwa okuphelele / isivuno esikhulu kakhulu, isikhathi sokukhipha esincishisiwe, ukusebenza kahle okuthuthukisiwe, ukuhambisana nanoma iyiphi i-solvent, nokuba yindlela yokukhipha engeyona eyokushisa.
Lesi sibalo sikhombisa i-ultrahigh-performance liquid chromatography nge-diode-array detector (UHPLC-DAD) chromatogram yama-phenolics amaqabunga omnqumo akhishwe nge-ultrasonically. Inani eliphakeme 1 no-2 litholwe ku-325nm (imigqa ebomvu), kuyilapho i-peak 3 (ulayini oluhlaza okwesibhakabhaka) itholwe ku-280nm.
isithombe nokutadisha: UGiocometti, J. et al. (2018)
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) nge-batch reactionor
I-Olive leaf extract icebile kuma-polyphenols afana ne-oleuropein, i-caffeic acid, i-hydroxytyrosol, i-verbascoside, i-rutin, i-quercitin njll.
Umthombo: Omar et al. 2017
Ama-Olive Leaf Extracts Akhiqizwe yi-Sonication
Izimo ezimbi kakhulu zemvelo endaweni "eshisayo" ye-ultrasonic cavitation zinemiphumela ehlukahlukene ezintweni zezitshalo kanye nokukhishwa kwayo. Lokhu kufaka ukunqoba ukungena kokukhetha kocwambu lweseli, ukushintshana okwandayo kwezinto phakathi kwengaphakathi leseli ne-solvent, ukuphazanyiswa kwamaseli ngomshini nokudedelwa kwezinto ezingaphakathi kwamangqamuzana (okusho i-phyto-chemicals efana ne-oleuropwin, i-hydroxytyrosol, i-gallic acid njll.) . Le miphumela iholela ekukhiqizeni okuphezulu kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ngesikhathi esifushane kakhulu sonication. I-400 watt processor ultrasonic efana ne-
I-UP400St yakwaHielscher ingacubungula iqoqo elingu-10 litre slurry botanical kungakapheli imizuzu engu-5-8. Ama-ultrasonicators ezimboni acubungula i-slurry equkethe izinto zezitshalo ne-solvent ekugelezeni okuqhubekayo. I-medium iphonswa nge-reactor ye-ultrasonic futhi ihanjiswe lapho. Esikalini sezimboni, i-UIP4000hdT (4kW) ingafinyelela i-approx. 3L / iminithi.
Ngenxa yesivuno esikhulu sokukhishwa nesivinini senqubo, isizinda se-ultrasonic sisebenza kahle kakhulu. Ngakho-ke, i-sonication ishintshwe ngokushesha ngabakhiqizi abaningi bokukhipha abakhiqiza ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu, isb CBD, cannabinoids, vanilla, algae, ginger, nezinye izinto eziningi zezitshalo. I-Ultrasonic cavitation ingafinyelela isivuno sokukhishwa esingu-95-99% wenhlanganisela esebenzayo equkethwe kuma-botanicals. Isibonelo, ucwaningo lubonise ukusebenza ngempumelelo kokukhishwa okungu-99,27% kokukhishwa kwama-phenolics aphelele emaqabungeni omnqumo. (I-Luo, 2011) Inqubo ye-ultrasound ingashintshwa ngokufanelekile entweni eluhlaza kanye nekhwalithi yokukhishwa oyifunayo ngokulungisa imingcele yenqubo (i-ultrasonic amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, i-viscosity).
Isizinda se-Ultrasonic sihambisana cishe nanoma yiluphi uhlobo lwe-solvent. Ngokukhishwa kweqabunga lomnqumo elenziwa nge-ultrasonically, i-ethanol e-aqueous engu-80% itholakale isebenza kahle kakhulu. Kepha isivuno sokukhishwa kwamakhemikhali athile we-phytochemical singaguqulwa ngokukhetha enye i-solvent ene-polarity ehlukile (isb methanol).
Unentshisekelo ekwandiseni isivuno sakho samafutha omnqumo asezintombi ngesikhathi sokuxakaniseka? Bese uchofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuxubana kwe-ultrasonic kwe-EVOO!
Izinzuzo zesizinda se-ultrasonic isivuno esikhulu sokukhipha, ukukhetha kwamahhala kuphela (isb. Amanzi, i-ethanol, ingxube yamanzi-i-ethanol, uwoyela womnqumo, njll.), Kanye nokusebenza okulula nokuphephile. Ngenxa yamandla amakhulu we-sonication, izixazululi zemvelo nezincane ezinjengamanzi, i-ethanol njll. Zivame ukwanela ukufeza isilinganiso esinqunyiwe sokukhipha kanye nesivuno. Ngenxa yalokho, isizinda se-ultrasonic sinciphisa isikhathi sokukhipha futhi sinika amandla ukusetshenziswa okuncishisiwe kwama-solvents noma ukusetshenziswa kwama-solvents amnene, amnene. Lokhu kusho ukuthi isizinda se-ultrasonic sivumela zombili, amazinga aphezulu wokukhipha kanye nokukhishwa okunempilo (isb. Ukukhishwa kwamanzi abandayo). Njengoba izinga lokushisa lenqubo lingalawulwa ngokunembile ngesikhathi se-sonication, ukubola okushisayo kwezinto ezikhishwayo ngenxa yokushisa okuphezulu ngokweqile kanye nokuhwamuka kwezinto kugwenywe.
Uma kuqhathaniswa ne-CO ebukhali2 extractor, izindleko zokutholwa komkhiphi we-ultrasonic ziphansi. Amaprosesa e-ultrasonic nawo angathola amaphuzu ngokwezindleko zokusebenza, ukusebenza okulula, okusebenziseka kalula nokuphepha emsebenzini.
ultrasonics – Ngezinto Ezincane kuze kufike Ekukhiqizeni Kwezimboni
Isici esikhethekile sokucubungula kwe-ultrasonic ukukala okulinganayo kwenqubo yokukhipha. Izifundo ezenzekayo kanye nokukhiqizwa kwamaqoqo amancane kungenziwa kalula ngedivayisi ephathekayo ye-ultrasonic emkhunjini ovulekile. Lokhu kwenza kube lula ukuhlola ukusebenza kahle kanye nekhwalithi yenqubo yokukhipha i-ultrasonic. Noma imiphi imiphumela etholakale ngezinga elincane ingakhiqizwa ngokuphelele futhi inyuswe. Ukulawulwa kwedijithali kwesikhiphi se-ultrasonic kanye nokungena ngemvume kwedatha okuzenzakalelayo kwamapharamitha we-ultrasonic ekhadini le-SD langaphakathi kuvumela ukuqapha okuqondile kwenqubo kanye nokuzala kabusha kwezindinganiso zekhwalithi ezingaguquguquki. Iphothifoliyo yomkhiqizo weHielscher Ultrasonics 'inikeza ama-extractors e-ultrasonic kuzo zonke izilinganiso – kusuka kumadivayisi we-50 watts aphathwa ngesandla kuya kuma-watts ayi-16,000 e-ultrasound yezimboni zokukhiqiza okusemgqeni. Ngenxa yesipiliyoni samashumi eminyaka se-Hielscher Ultrasonics kwisizinda se-ultrasonic kanye nokufakwa kwamakhulu amaningana amasistimu wesizinda se-ultrasonic emhlabeni wonke, izeluleko ezinekhono neziphelele ziyaqinisekiswa.
Izinzuzo Zezempilo ze-Olive Leaf Extract
Izakhi ezinkulu zamaqabunga omnqumo ama-secoiridoids (uhlobo lwama-monoterpenoids) njenge-oleuropein, ligstroside, methyloleuropein, ne-oleoside; ama-flavanoid afana ne-apigenin, kaempferol, luteolin, ne-chrysoeriol; namakhemikhali e-phenolic afana ne-caffeic acid, i-tyrosol, ne-hydroxytyrosol. Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive kunemiphumela yokulwa nokuvuvukala futhi kutholakale ukuthi kuthuthukisa izifo ezingalapheki (isib. Isifo sikashukela, isifo samathambo), izifo zenhliziyo, imithambo yegazi, kanye nokwenza izindlela zokulwa nomdlavuza. Isibonelo, imiphumela ezuzisayo ye-oleuropein ezigulini zesifo sikashukela ixhunyaniswe nokwehliswa kwengcindezi ye-oxidative, ukunciphisa umfutho wegazi, ukuvinjelwa kokwakheka kwemikhiqizo yokuphela kwe-glycation end (AGE), ukwehla kwamazinga kashukela egazini, ukwanda kwe-glucose okubangelwa ukukhishwa kwe-insulin ne-GLP-1, ukwanda kokutholwa kweglucose phakathi kweminye imiphumela yeselula neye-metabolic.